ကျော်မသွားနဲ့ ဖတ်ပါ…မိမိ friends များအတွက်ရှယ်ပေးပါ.. အရင်အပတ်က နှလုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တယ်…..
ဒီအပတ်မှာတော့ အဲဒီ့လိုပိတ်ဆို့နေတာကို အလွယ်တကူရှင်းထုတ်ပစ်နိုင်တဲ့ နည်းကောင်းတစ်ခုကို ပေးပါမယ်၊America မှာ ချမ်းသာတဲ့တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်….
ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ဘဲသားစတဲ့ ကုန်းသတ္တဝါအသားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ အမြဲတန်းစားလေ့ရှိသူပေါ့၊ လှုပ်ရှားမှုကလည်း သိပ်မရှိဘဲ ဇိမ်ခံတာသာများတယ်…
အသက်နဲနဲရလာတော့ ရင်ဘတ်ကအောင့်အောင့်လာတယ်၊ဒါနဲ့သူလည်း ဆရာဝန်ကိုသွားပြရတာပေါ့၊ ဆရာဝန်ကစစ်ကြည့်လိုက်တော့ နှလုံးသွေးကြောတွေ ၃ချောင်းလုံး 90% ပိတ်နေပြီ ခွဲစိတ်ကုသမှရမယ်ဆိုပြီး သူကိုရက်ချိန်းပေးလိုက်ပါတယ်….
သူလည်း စိတ်တော်တော်ညစ်သွားပြီး တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးတွေဆီကို သွားပါတယ်၊တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးက သူ့ကိုနေ့စဉ်ကြွက်နားရွက်မှိုကို စားခိုင်းပါတယ်….
ဘာဟင်းချက်ချက် ကြွက်နားရွက်မှိုသုံးလေးခုလောက် ထည့်ချက်ပြီး စားခိုင်းတော့ သူလည်းမပျက်မကွက် စားပါတယ်
ဒီလိုနဲ့ ၃ပတ်အကြာ ဆရာဝန်ဆီပြန်ပြတော့ သူ့ရဲ့ပိတ်နေတဲ့ နှလုံးသွေးကြော ၃ချောင်းလုံးဟာ လုံးဝပြန်ပွင့်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်….
ဆရာဝန်ကမယုံလို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်စစ်ပေမဲ့ အံ့သြစွာကောင်းလောက်အောင်ပင် သွေးကြောတွေ ရှင်းလင်းကောင်းမွန်နေတာ တွေ့ရတော့ ခင်ဗျားဘယ်လိုများ လုပ်လိုက်တာလဲဗျာလို့ကို မေးယူရပါတယ်…
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ကြွက်နားရွက်မှိုကို နေ့စဉ်နဲနဲစီ စားခဲ့တာပါပဲဗျာလို့ သူကပြန်ပြောတော့ ဆရာဝန်ကသူ့ကို အကြိမ်ကြိမ် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်….
နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကို အလွယ်တကူဖြေရှင်းပေးလိုက်တာကတော့ ကြွက်နားရွက်မှိုပဲဖြစ်ပါတယ် သွေးကြောတွေထဲမှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အနည်အနှစ်တွေကိုကြွက်နားရွက်မှိုက လွယ်ကူစွာရှင်းလင်းပေးပါတယ်….
ဝက်သားကြိုက်တဲ့တရုတ်တွေအသက်ရှည်ကြတာဟာကြွက်နားရွက်မှိုစားလို့လည်းပါပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရှေးတုန်းကတည်းကအသက်ရှည်ခဲ့ကြတာလည်းကြွက်နားရွက်မှိုစားခဲ့လို့ပါပဲ….
ကြွက်နားရွက်မှိုကအဲဒီပြဿနာကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးပါတယ်၊ အိမ်မှာ လူကြီးမိဘတွေရှိရင်ကြွက်နားရွက်မှိုကိုကျွေးပါ၊ အသက်ရှည်ပါလိမ့်မယ်….
ကိုယ်အလေးချိန်များလို့အဆီချချင်သူတွေအတွက်လည်းကြွက်နားရွက်မှိုကလက်နက်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ အမှန်တကယ်ကိုအဆီကျပါတယ်၊ ဒါကြောင့်တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်ကြာဆံဟင်းခါးချက်စားပေးရင်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်….
အ မြဲ တန်း စား ပေး ရင် သွေး ကြဲ ဆေး သောက် နေ ရ သူ တွေ တောင် ဆေး သောက် ဖို့ မ လို တော့ အောင် ကောင်းနေ ပါ လိမ့် မယ် သွေး ကြော လည်း ရှင်း အ ဆီ လည်း ကျ ဆို တော့ ကျန်း မာ ရေး လည်း ကောင်း လူ လည်း လှ တာပေါ့ ၊ ဘယ် လောက် ကောင်း လိုက် မ လဲ နော်…..
ဆရာဝနျတောငျ မယုံနိုငျတဲ့ သှေးကွောမြားအတှငျး ပိတျဆို့နသေောအဆီမြားကို ရှငျးထုတျပေးနိုငျတဲ့ ကွှကျနားရှကျမှို
ကြျောမသှားနဲ့ ဖတျပါ…မိမိ friends မြားအတှကျရှယျပေးပါ.. အရငျအပတျက နှလုံးသှေးကွော ပိတျဆို့ရတဲ့အကွောငျးရငျးတှကေို ပွောပွခဲ့တယျ…..
ဒီအပတျမှာတော့ အဲဒီ့လိုပိတျဆို့နတောကို အလှယျတကူရှငျးထုတျပဈနိုငျတဲ့ နညျးကောငျးတဈခုကို ပေးပါမယျ၊America မှာ ခမျြးသာတဲ့တရုတျလူမြိုးတဈယောကျ ရှိပါတယျ….
ဝကျသား၊ အမဲသား၊ ဘဲသားစတဲ့ ကုနျးသတ်တဝါအသားတှကေို ကွိုကျနှဈသကျလို့ အမွဲတနျးစားလရှေိ့သူပေါ့၊ လှုပျရှားမှုကလညျး သိပျမရှိဘဲ ဇိမျခံတာသာမြားတယျ…
အသကျနဲနဲရလာတော့ ရငျဘတျကအောငျ့အောငျ့လာတယျ၊ဒါနဲ့သူလညျး ဆရာဝနျကိုသှားပွရတာပေါ့၊ ဆရာဝနျကစဈကွညျ့လိုကျတော့ နှလုံးသှေးကွောတှေ ၃ခြောငျးလုံး 90% ပိတျနပွေီ ခှဲစိတျကုသမှရမယျဆိုပွီး သူကိုရကျခြိနျးပေးလိုကျပါတယျ….
သူလညျး စိတျတျောတျောညဈသှားပွီး တရုတျရိုးရာတိုငျးရငျးဆေးဆရာကွီးတှဆေီကို သှားပါတယျ၊တိုငျးရငျးဆေးဆရာကွီးက သူ့ကိုနစေ့ဉျကွှကျနားရှကျမှိုကို စားခိုငျးပါတယျ….
ဘာဟငျးခကျြခကျြ ကွှကျနားရှကျမှိုသုံးလေးခုလောကျ ထညျ့ခကျြပွီး စားခိုငျးတော့ သူလညျးမပကျြမကှကျ စားပါတယျ
ဒီလိုနဲ့ ၃ပတျအကွာ ဆရာဝနျဆီပွနျပွတော့ သူ့ရဲ့ပိတျနတေဲ့ နှလုံးသှေးကွော ၃ခြောငျးလုံးဟာ လုံးဝပွနျပှငျ့သှားတာကိုတှရေ့ပါတယျ….
ဆရာဝနျကမယုံလို့ အကွိမျကွိမျပွနျစဈပမေဲ့ အံ့သွစှာကောငျးလောကျအောငျပငျ သှေးကွောတှေ ရှငျးလငျးကောငျးမှနျနတော တှရေ့တော့ ခငျဗြားဘယျလိုမြား လုပျလိုကျတာလဲဗြာလို့ကို မေးယူရပါတယျ…
ဟုတျကဲ့၊ ကြှနျတျောဒီရကျပိုငျးလေးအတှငျးမှာ ကွှကျနားရှကျမှိုကို နစေ့ဉျနဲနဲစီ စားခဲ့တာပါပဲဗြာလို့ သူကပွနျပွောတော့ ဆရာဝနျကသူ့ကို အကွိမျကွိမျ လကျဆှဲနှုတျဆကျလိုကျရပါတယျ….
နှလုံးသှေးကွောပိတျဆို့မှုကို အလှယျတကူဖွရှေငျးပေးလိုကျတာကတော့ ကွှကျနားရှကျမှိုပဲဖွဈပါတယျ သှေးကွောတှထေဲမှာ ပိတျဆို့နတေဲ့ အနညျအနှဈတှကေိုကွှကျနားရှကျမှိုက လှယျကူစှာရှငျးလငျးပေးပါတယျ….
ဝကျသားကွိုကျတဲ့တရုတျတှအေသကျရှညျကွတာဟာကွှကျနားရှကျမှိုစားလို့လညျးပါပါတယျ ၊ ကြှနျတျောတို့မွနျမာတှရှေေးတုနျးကတညျးကအသကျရှညျခဲ့ကွတာလညျးကွှကျနားရှကျမှိုစားခဲ့လို့ပါပဲ….
ကွှကျနားရှကျမှိုကအဲဒီပွဿနာကိုကောငျးကောငျးဖွရှေငျးပေးပါတယျ၊ အိမျမှာ လူကွီးမိဘတှရှေိရငျကွှကျနားရှကျမှိုကိုကြှေးပါ၊ အသကျရှညျပါလိမျ့မယျ….
ကိုယျအလေးခြိနျမြားလို့အဆီခခြငျြသူတှအေတှကျလညျးကွှကျနားရှကျမှိုကလကျနကျကောငျးတဈခုပါပဲ အမှနျတကယျကိုအဆီကပြါတယျ၊ ဒါကွောငျ့တဈပတျကိုတဈကွိမျလောကျကွာဆံဟငျးခါးခကျြစားပေးရငျအမြားကွီးအကြိုးရှိပါတယျ….
အ မွဲ တနျး စား ပေး ရငျ သှေး ကွဲ ဆေး သောကျ နေ ရ သူ တှေ တောငျ ဆေး သောကျ ဖို့ မ လို တော့ အောငျ ကောငျးနေ ပါ လိမျ့ မယျ သှေး ကွော လညျး ရှငျး အ ဆီ လညျး ကြ ဆို တော့ ကနျြး မာ ရေး လညျး ကောငျး လူ လညျး လှ တာပေါ့ ၊ ဘယျ လောကျ ကောငျး လိုကျ မ လဲ နျော…..